Jananinepal.comनेपालमा बढ्दो प्रदुषण, विद्युतीय गाडी र राजनीति - Jananinepal.com
हिरालाल चालिसे ' हरि '
आज भोलि हामी सुनिरहेकाछौं र महुसुस पनि गरिरहेका छौँ कि विश्व सँगै नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन को कारणले मौसम पनि निकै छिटो फेरबदल भइरहेको छ । अनावृष्टि, खण्ड वृष्टी र अतिवृष्टि जस्ता मौसम सम्बन्धी घटना भइरहेको हामी पाउँछौँ । नेपालका धेरै जसो मानिस परम्परागत कृषि निर्भर रहेको र अधिकाँस कृषि आकाशे पानी मा भर पर्ने अवस्था भएको कारणले पनि मौसम मा भइरहेको फेरबदल सजिलै महसुस गर्न सक्दछौं। पृथ्वीमा नेपालको अवस्थिति हेर्ने हो भने पृथ्वी को उत्तरी गोलार्धको २६ डिग्री २२ मिनेट देखि ३० डिग्री २७ मिनेट उत्तरी अक्षांश मा पर्दछ र नेपाल समुन्द्र बाट सरदर ११२७ किमी टाढा पर्दछ । यसरी हेर्दा नेपाल उष्ण हावापानी प्रदेश मा पर्दछ तर नेपाल को उत्तर तर्फ हिमालय पर्वत श्रृङ्खला रहेको र बाह्रै महिना हिउँ जमिरहने अग्ला हिमालहरूको कारणले र प्रशस्त खोला नदी नाला भएको कारण ले औषत मा समशितोष्ण खालको हावापानी रहेको छ । हिउँदमा सुख्खा, पानी नपर्ने र ग्रीष्ममा मनसुनी वायु कारण ले पानी पर्ने नेपालको हावापानी को विशेषता पनि हो । तर पछिल्ला केही वर्ष यता जलवायु परिवर्तन को असर बढ्दै गएको कारण ले मौसम सम्बन्धी गतिविधि मा निकै परिवर्तन भएको महसुस गरिरहेका छौं । हिउँदे वर्षा बढी रहेको छ। यसरी जलवायु परिवर्तन हुनुको एउटा प्रमुख कारण पृथ्वी को तापक्रम वृद्धि ( ग्लोबल वार्मङ) हुँदै जानु हो । जसको असरको कारणले हिमालमा हिउँ पग्लेर हिमाल कालो देखिन थालेको छ, विभिन्न स्थानका पानी का मुलहरु सुक्न थालेकाछन्, खोला नदी मा पनि पानी को मात्रा कम हुँदै गएका छन्, समुन्द्र मा पानी को सतह बढ्दै गएको छ जसले गर्दा समुन्द्री तटीय क्षेत्रका वस्ती हरु डुबान मा पर्ने सम्भावना बढेको छ । कहीं लामो समय खडेरी परेर किसानले खेतीपाती गर्न सकेका छैनन् त कतै अधिक वर्षाको कारणले बाढी पहिरो र डुबान ले वस्ती नै सखाप पारेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? गाउँमा बुढापाका लाई सोध्यौ भने आजभोलिका मानिस हरु ले धर्मकर्म छाडेर पापी भएकले यस्तो भएको भन्छन् । यस्तो गतिविधि हुनु पृथ्वीमा प्रलय आउन लागेको भन्छन् । वैज्ञानिक हरूका अनुसार पृथ्वीको तापक्रम बढेर यस्ता मौसम सम्बन्धी गतिविधि हरु प्रतिकूल हुँदै गएको छ । पृथ्वीको तापक्रम कसरी, कसले बढाए होलात ? पृथ्वीको तापक्रम बढ्नुका विभिन्न कारणहरूमध्ये एउटा कारण मानिसहरूले सञ्चालन गर्ने उद्योग कलकारखाना, डिजेल पेट्रोल कोइला बाट चल्ने विभिन्न यातायात का साधन हरूले उत्सर्जन गर्ने ग्याँसको मात्रा तथा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढ्दै जानु हो । यसरी पृथ्वीको तापक्रम बढाउनु मा प्रमुख भूमिका मानिस को नै रहेको देखिन्छ । त्यसैले बुढापाका ले भनेको र वैज्ञानिक ले भनेको कुरा हरु कहीं कतै मिलेको वा मिल्न गएको देखिन्छ । हामीले प्रयोग गर्ने यातायात साधनहरु मोटरसाइकल, ट्याक्सी,कार, बस, ट्रक, जहाज, पानी जहाज रेल आदि हुन् । हालसम्म हेर्दा यी धेरै जसो साधन हरु डिजेल, पेट्रोल बाट चल्छन् केही रेलहरु त कोइला बाट चल्छन् भलै नेपालमा रेल छैन । यी खनिज इन्धन बाट चल्ने गाडीले फालेको धुवाँ वा यिनीहरूको इन्जिनको तापक्रम वायुमण्डल मा गई मिसिनाले वातावरण को तापक्रम बढदै गएको छ र तिनीहरूबाट निस्कने कार्बनडाइअक्साइड जस्ता ग्याँस हरूले वायु प्रदुषण गराएको छ । वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड को मात्रा बढ्दै जाँदा मानिसमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू पनि बढ्दै गएको छ । अम्लीय वर्षा हुन गई बोटबिरुवा वृद्धि विकास र खेतीपातीमा समेत असर पर्न थालेको छ, धातु युक्त मानव निर्मित संरचना पनि खिइँदै गइरहेको छन् ।
पृथ्वीको तापक्रम बढाउने काम मा करिब २५ प्रतिशत भूमिका यस्ता इन्धन बाट चल्ने गाडीको रहेको कुरा तथ्याङ्क ले देखाउँछ । भने विश्व को ऊर्जा खपत को स्थिति हेर्दा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ऊर्जाको करिब ३५ प्रतिशत माग यस्तो इन्धन ले पूर्ति गरेको देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न र खपत कम गर्न विकसित देशहरुले विद्युतीय सवारी साधन को प्रयोगमा जोड दिन थालेका छन् । विभिन्न देशहरुले योजना नै बनाएर आगामी २० देखि ५० वर्ष भित्र डिजेल पेट्रोल बाट चल्ने गाडी बन्द गरी विद्युतीय गाडी प्रयोग गरी ग्लोबल वार्मिङ को करिब एक चौथाई समस्या समाधान गर्ने अठोट गरेका छन् । र नागरिकलाई विद्युतीय सवारी साधन मा विभिन्न प्रकार का छुट दिई यसको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरेका छन् । चीन, अमेरिका, जापान, क्यानाडा द कोरिया लगाएतका देश हरूले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा धेरै मात्रामा मूल्यमा छुट दिएका रहेछन् । कति देशहरूमा त विद्युतीय सवारी साधन चलाउँदा कर नै तिर्नु नपर्ने वा डिजेल पेट्रोल को सवारीको भन्दा धेरै कम कर तिर्ने नीति बनाएका छन् । यसरी ती देशहरुले वातावरण र नागरिकको स्वास्थ्य को ख्याल गरेको देखिन्छ । तर नेपाल मा भने त्यस्तो देखिँदैन । विद्युतीय गाडी मा अन्य गाडी सरह वा त्यो भन्दा पनि बढी कर लगाएको देखिन्छ । आव २०७७/०७८ को बजेटमा हेर्ने हो भने विद्युतीय गाडी आयात गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण कर १३० देखि १४० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । अब विद्युतीय गाडी पेट्रोलले चल्ने गाडीभन्दा महँगो हुन गएको छ । विद्युतीय हुन्डाई कोना कारको मूल्य ६५ लाख रुपैयाँबाट बढेर करिब ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आखिर किन त? नेपालका सरकार सञ्चालन गर्ने संग वातावरण सम्बन्धी ज्ञान नभएर हो या ध्यान नपुगेर हो अथवा डिजेल पेट्रोलका व्यापारी संग बाट बढी कमिसन आउने भएर हो । यो बुझ्न सकिएन । तर यसबाट जनता लाई विद्युतीय गाडी मा कर बढाएर निरुत्साहित गराएको हो भन्ने कुरा बुझ्न चाहिँ सकिन्छ । नेपाल मा डिजेल पेट्रोल भारत बाट आउँछ । नेपाल मा विद्युतीय गाडी को प्रयोग बढ्दा भारत बाट आउने इन्धनको खपत कम हुन्छ जसको प्रत्यक्ष असर नेपाल भारत का इन्धन व्यापारी लाई पर्छ, उनीहरू मानविय स्वास्थ्य र वातारणीय स्वास्थ्य मा वास्ता गर्दैनन् र गर्ने वाला पनि छैन किन कि व्यापारीलाई व्यापार भन्दा ठूलो आम सर्वसाधारण को स्वास्थ्य हुँदैन, त्यसमा पनि फरक देशका व्यापारी । त्यसै ले उनीहरूले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन मा कर बढोस् भन्ने नै चाहन्छन् र विद्युतीय गाडी नचलोस् भन्ने नै चाहेको देखिन्छ । तर सोच्नु पर्ने सरकारले हो । यहाँ कुनै न कुनै राजनीतिक स्वार्थ वा दवाव छ भारत बाट या व्यापारी बाट । नेपालमा वायु प्रदूषण को एउटा प्रमुख कारण डिजेल पेट्रोल बाट चल्ने सवारी साधन नै हो । यसलाई मध्य नजर गरी वि. स. २०७४ भाद्र २६ मा तत्कालीन एक साँसद ले संसद मा वायू प्रदुषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन संचालन गर्नुपर्ने विकल्पसहितको संकल्प प्रस्ताव राखेका थिए, जसमा सन् २०२७ सम्ममा काठमाडौं लाई र सन् २०३१ सम्म नेपाललाई नै विद्युतीय सवारी युक्त सहर बनाउने रहेको थियो । भारतले नाकावन्दी लगाए पछि को संसद ले पारित गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा नीति जसले नेपाल लाई भारत संग डिजेल पेट्रोल मा रहेको परनिर्भरता घटाउने उद्देश्य लिइएको पनि थियो तर हाल ती सबै कार्यान्वय नगरिएको वा गर्न नचाहिएको अवस्था छ ।
अझ, नेपालमा जलस्रोत प्रशस्त छ र जलविदयुत् उत्पादनको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । निकट का केही वर्षमा नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर बनी बेच्न सक्ने अवस्थामा पुग्दैछ भन्ने समाचार हरु आइरहेका छन् । यस्तो अवस्था मा विद्युतीय सवारी चलाउन कति सस्तो पर्दो हो यदि सरकार ले विद्युतीय सवारी साधन आयात मा कर छुट गर्ने वा यस्ता साधन निर्माण वा प्रयोग गर्न चाहने लाई आर्थिक साहेता गरिदिएमा । नेपालका अधिकांश सहरहरू प्रदुषण ले ग्रसित बनेका छन् । यसको प्रमुख कारण माथि उल्येख भए अनुसार पनि डिजेल पेट्रोल बाट चलने गाडी ले फ्याँक्ने धुवाँ नै हो । यस्तो धुवाँले हाम्रो स्वास्थ्य मा कति प्रतिकूल असर गर्दछ भन्ने त हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौं । त्यस सँगै ग्लोबल वार्मङ, अम्लीय वर्षा त छँदै छ । काठमाडौं लगायत का सहर मा लक डाउन ले गर्दा करिब २/३ महिना गाडी नचल्दा वातावरण सुन्दर र सफा भएको कुरा समाचारमा आइरहेका थिए । अझै काठमाडौं बाट उत्तर तर्फका हिमालहरू प्रष्टै देखिएका तस्बिर हरु सामाजिक सञ्जाल मा भाइरल नै थिए । कल्पना गरौं नेपाल मा चल्ने अधिकाँस सवारी साधन विशेष गरी यात्रुवाहक सवारी साधन विद्युत बाट चल्ने प्रयोग गरियो भने कस्तो हुँदो हो । नेपाल वास्तवमै सुन्दर हुने थियो । जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा को स्रोत भएकाले जति पनि उत्पादन र प्रयोग गर्न सकिन्छ । डिजेल पेट्रोल को प्रयोग नगर्ने वा कम मात्रामा प्रयोग गर्ने हो भने यसले हामीलाई धेरै कुरा मा फाइदा पुर्याउँछ। जस्तै वातावरण र वायु प्रदूषण कम हुन्छ, मानिस तथा जिवजनावरहरु स्वस्थ रहन्छन्, हरितग्रह प्रभाव कम हुन्छ, वातावरण सन्तुलन कायम हुन्छ, अम्लीय वर्षा कम हुन्छ, भविष्यमा आउनसक्ने ऊर्जा संकट बाट बच्न सकिन्छ । त्यसले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले नै एक बलियो नीति बनाएर डिजेल पेट्रोल को खपत कम गर्न सकेमा नेपालीहरु स्वस्थ भई सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा सार्थक बन्नका लागि एउटा आधार तयार हुनसक्दछ । नेपाली दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ रहन पाउने कुरामा त राजनीति नगरियोस् ।